पेट पोल्ने तथा दम खोकी जस्ता समस्या छ भने सेवन गर्नुहोस् मिश्री, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पेट पोल्ने तथा दम खोकी जस्ता समस्या छ भने सेवन गर्नुहोस् मिश्री
धनियाँ र सुप बराबर कुटेर मिश्री मिसाएर १/१ चम्चा बिहान,बेलुका खाने गरेमा गर्मिले पेट पोल्ने रोग एक हप्तामा नै निको हुन्छ।
सुप एक चम्चा, एक ग्लास पानीमा एक टुक्रा मिश्री हालेर उमाल्नुहास् र आधा भएपछि छानेर सेवन गर्नुहास्, २-३ दिनमा नै ठीक हुन्छ।
राती सुत्ने बेलामा ८/१० गेडा मरिच र मिश्रीको टुक्रा चपाएर तातो पानीले निलेमा चिसोले घाँटी बसेको निको हुन्छ।
घाँटी बसेर बोल्नै नसक्ने भएको छ भने १०/१२ पात तुलसी ४/५ दाना मरिच र मिश्रीको टुक्रासँग चपाएर निल्दा घाँटी बसेको २-३ मात्रामै ठीक भएर आउँछ।
दतिउनको चार-पाँच वटा पात एक ग्लास पानीमा मिश्री हालेर पकाएर बिहान/बेलुका खाने गरेमा सम्पूर्ण शरीर सुन्निएको ठीक हुन्छ।